Otu esi etinye ihe nchọgharị Opera na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
Mepee ihe nchọgharị Opera
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi etinye ihe nchọgharị Opera na Ubuntu 20.04.
Ndị a bụ ihe ndabere zuru oke nke enwere ike itinyelarị, mee iwu ahụ n'agbanyeghị ma ọ bụrụ na ejighị n'aka na ọtụtụ nrụnye ndị ọzọ ga-achọ ihe ndị a na sistemụ gị.
ụdị Y, wee pịa Tinye igodo ịga n'ihu na ntinye.
họrọ EE na pịa Tinye igodo imecha echichi.
Ekele, ị tinyela ihe nchọgharị Opera na Ubuntu 20.04.
Categories Ubuntu Tags Opera Nchọgharị, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo
Otu esi etinye asụsụ mmemme Rust na Rocky Linux 8